Somaliland.Org » OGAAL: ‘Doorashadu waa inay 31 May dhacdaa… Guurtidu awood uma leh muddaynta’
March 30th, 2009 Comments Off Maxay ku kala duwan yihiin Komishankii hore iyo kuwa maantu?
“Masuulka Kursiga fadhiyaa halay kordhiyo & inuu Doorasho qaban waayo oo ummadda cabudhiyo maaha”
Shukri X. Ismaaciil Baandare – Waraysi
“Haddii mudda-kordhin uun la wado waxa iman kara oo ay taasi horseedi kartaa cawaaqib-xumo”
“Haddii Komishanku hanan waayo Kalsoonida Xisbiyada iyo Shacabka, awood-fulineed yeelan maayo”
“Waa nasiib-darro inay maanta Komishanka lacagtii doorashadu kaga xaniban tahay Xisaab-xidh la’aan”
Hargeysa (Ogaal)- “Komishanka waxa ugu daran laba qodob ayaa la eegaa, haddii dadkii Kubadda wada Ciyaarayay ee Doorashada wada-galayay ee iyagu tartamayay diyaar yihiin, waxa ugu horeeyaa waa wakhtiga, waxa la baad ee ku soo xigaa waa bajadka (Kharashka). Taas oo marka laysla helo ay tahay in jadwalka ay u gudbiyaan dhinacyadaas tartamaya oo dhinac waliba uu ku xisaabtamayo. Dadka Xisbiyada tartamaya, Komishanka iyo Deeq-bixiyayaasha ayaa heshiis ka gaadha xiliga loo arko in ay suuragal tahay ee ay doorashadu ku qabsoomi karto.” Sidaa waxa tidhi Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare oo ka mid ahayd Guddidii hore ee Doorashooyinka Somaliland, waxaanay ka hadashay aragtideeda ku wajahan dib-u-dhaca Doorashada iyo Muddo-kordhinta ay mar kale Guurtidu u samaysay Madaxweyne Rayaale.
Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxa kale oo ay ka hadashay Doorka ay Golaha Guurtidu ku leeyihiin Doorashooyinka Somaliland, iyada oo isbar-bardhig ku samaysay Komishanka hadda ee Doorashooyinka iyo Guddidii hore ee ay Xubinta ka ahayd oo ay ku tilmaantay guddi qiimayn ku samayn jirtay tallaabo kasta oo ay ka qaadaayaan muddaynta Waqtiga Doorashada. “Annagu wakhtigii aanu Komishanka ahayn waxaanu eegi jirnay Wakhtiga ugu suurtagalsan ee ay Dalka Doorasho ka qabsoomi karto. Waxaanu eegi jirnay Dhulka Xeebaha ah, Dhulka Miyiga ah, Xilli-Roobaadka iyo Xilli-Abaareedka, hawsha na hortaala iyo kharashaadka aanu haysano, duruufaha taagan iyo waxaas oo dhan. Marka aanu is waafajino ayaanu wakhti qaban jirnay, kaas oo dhamaan dhinacyada ay doorashadu khusaysaa heshiis ku wada-yihiin. Haddii ay qabsoomi kari waydo Doorashadu Wakhtigii loo muddeeyay, oo cilado farsamo yimaadaan, cidda isla qaadanaysaa waa dhinacyada ay khusayso oo dhan. Ka dib marka Komishanku soo xaqiijiyo inaanay wakhtigii loo qabtay inay doorashadu dhacdo inaanay suuragal ahayn qabsoomiddeedu. Waa in ay dhinacyadaasi heshsiis ku yihiin oo uu Komishanka markaa Doorashada Gacanta ku hayaa fahansiiyo oo uu tuso, sababaha aan suuragalka ka dhigayn in ay doorashadu wakhtigeedii qabsoonto.” Ayay tidhi Shukri X. Ismaaciil Baandare oo Waraysi siisay Shabakadda Wararka ee Hadhwanaagnews oo aanu Warkan ka soo xiganay, waxaanay intaa ku dartay oo ay tidhi, “Laakiin in markasta marka ay Doorashadu soo dhawaato ee bili ka hadhsan tahay uu Komishanku ku baraarugo oo dib loo dhigo, isla markaana muddo-kordhin uun la sameeyo waa nasiib-darro. Komishanku iyaga ayaa og halka ay wax u marayaan iyo wakhtiga ay doorasho qaban karaan ee waxay ahayd in ay mar si caafifmaad-qabka u fikiraan oo ay isu eegaan baaxadda hawsha hortaala iyo wakhtiga ay suuragal tahay in ay doorasho qabtaan. Inkasta oo Komishankani ay na dheeraayeen diiwaan-gelin aan annaga Shaqada noogu jirin xiligayagii, taasoo aan odhan karo Qaraxyadii dalka ka dhacayna way sii culaysiyeen oo dib-u-dhaca qayb ayay ka tahay, haddana waxay ahayd in ay Komishanka hawsha gacanta ku hayaa ku xisaabtamaan hawsha u taala, kartidooda iyo wakhtiga la tirsanayay ee ay u muddeeyeen in ay doorashadu dhacayso.”
Shukri X. Ismaaciil Baandare waxyaabaha ay ka hadashay waxa kale oo ka mid ahaa Doorka ay Golaha Guurtidu ku leedahay arrimaha Doorashooyinka. Waxaanay sheegtay in Komishanka looga baahan yahay in ay kasbadaan Kalsoonida Axsaabta iyo Bulshada. “Guurtidu door aad u muhiim ah ayay ku leeyihiin arrintan doorashada, wakhtigan ay maanta dib-u-dhigeena waa wakhti Komishanku wax kasta ku qabsan karo oo ku filan, marka loo eego wakhtiga dib looga raray ee 31-ka bisha May 2009. Markaa waxa loo baahan yahay Komishanku in ay hantaan Kalsoonida Xisbiyada iyo Kalsoonida Shacbiga, hadduu kalsoonidaa hanan waayo oo mad-madaw laga dareemo Komishan noqon maayo, awood fulineedna ma yeelanayo.” Ayay tidhi Shuki Xaaji. Waxaanay u jeedisay Xisbiyada iyo Xukuumadda in ay hawshan isu-garab taagaan Komishanka oo ay ku taakuleeyaan sidii xal midaysan looga gaadhi lahaa. “In dimuquraadiyadda iyo doorashada meesha laga saaro oo beelbeel iyo mudda-kordhin lagu noqdaana waa qalad.” Ayay tidhi Shukri.
Mar ay Shukri ka jawaabaysay su’aal laga weydiiyay dhinaca hawl-gudashada Komishanka iyo siday uga go’an tahay in ay Doorasho dalka ka dhacdo, waxay tidhi, “Anniga ilama aha in aanay Komishanku daacad ka ahayn in doorasho qabsoonto, waayo waxa loo soo dhisay ee loo dhaariyay waa inay doorasho dalka ka qabtaan oo ay dhex-dhexaad iyo Garsoorayaal u noqdaan Xisbiyada tartamaya oo Masuuliyadda Qaranka ayaa saaran. Markaa isma lihi waa dad Masayrka ummadda ku ciyaari kara oo khiyaamayn kara, haddii ay taasi dhacdana waa arrin halis ah oo dadka iyo dalkaba dhibaato u horseedi karta..Dadkeenuna way iska dacaayad badan yihiin oo Annagaba wakhtigii aanu Komishanka ahayn Suuqa waa nalaga dacaayadayn jiray, oo la odhan jiray Xisbi hebel ayay la jiraan oo ay doorashada ugu shubayaan iyo daacad maaha, markaa waxaas yaan dhag loo dhign baan odhan lahaa.”
Sidoo kale waxa wax laga weydiiyay Xisaab-xidhada Kharashkii Diiwaangelinta iyo jawaabtay ka bixiyeen Deeq-bixiyayaashu ee ay ku xidheen bixinta Kharashka Doorashooyinka, mar ay ka jawaabaysay su’aashaa waxay tidhi, “Waa nasiib-darro in ay maanta Komishanka lacagtii doorashadu kaga xaniban tahay Xisaab-xidh la’aan, waa tala-xumo in Xisaab-celintii wixii ay qabteen ee shaqadooda ahayd inay iyagu celiyaan shuruud lagaga dhigo. Sababtoo ah, warbixinta iyo xisaab-celinta wixii ay qabteen waa waajibaadka iyo masuuliyadda Komishanka doorashooyinka looga baahan yahay ee ay hay’adda u yihiin, taas haddaanay samayninna way adag tahay sida ay gaaladu u aamini kartaa, waayo wixii hore waxa lagu qabtay haddaanay ogaan suuragal maaha in ay lacag dambe si fudud kuugu soo daayaan. Xisaab-celintuna waxa ay kaw ka ahayd waxyaabihii aanu wakhtigayagii aadka isaga illaalin jirnay, kuna dedaali jirnay intaan nala waydiin in aanu celinno hadday ta deeq-bixiyayaasha tahay iyo hadday ta dawladda oo wakhtigaa lacagta ugu badan bixin jirtay tahayba.”
Mar sidoo kale Shukri Xaaji Ismaaciil wax laga weydiiyay saamaynta ay Doorashada ku yeelan karto diidmada ka soo yeedhay Axsaabta Mucaaradka ah eek u wajahan muddo-kordhinta loo sameeyay Madaxweyne Rayaale, ayaa waxay ku jawaabtay, “Wallaahi diidmadaasi haddii ay timaaddo ma fududa ee dhibteeda ayay leedahay, hase ahaatee, Somaliland waxa ay halkan ku soo gaadhay talo-wadaag, wada-hadal iyo isu-tanaasul. Maantana waxaan leeyahay, yaan laga tagin isu-tanaasulkii iyo wada-tashigii aynu halkan ku soo gaadhnay, ee waa in laysu yimaaddo, oo talo-qaran hawsha lagu dhameeyo.” Waxaanay intaa ku dartay oo ay tidhi, “Masuulka maanta Kursiga Qaranka looga taliyo ku fadhiyaa waa inuu ogaadaa in uu ku yimi Doorasho iyo kalsoonida Shicibka Somaliland oo taa uu masuul ku yahay, sidaa daraadeed, dadkii shalay kalsoonidooda siiyay marka ay xaq u yeeshaan in ay kalsoonidooda mar kale bixiyaan ee wakhtigii hore ee ay kalsoonida siiyeen ka dhamaado, hala ii kordhiyo iyo in uu doorasho qaban waayo oo ummaddii masiiirkooda ku aaminay cabudhiyo maaha ee waa in uu tixgelinta koobaad Shicibka siiyaa, doorashada u diyaargaroobaa. Kuwa Kursiga ku soo socdaana kalsoonida Shicibka ayay doonayaan in ay ku yimaaddaan, sidaa daraadeed, waa inay iyaguna tixgelinta koobaad Shicibka siiyaan.”
Dhinaca kale, mar Shukri wax laga weydiiyay kaalinta ay dib-u-dhaca Doorahsada ku yeelan karto Hay’adda Interpeace ayaa waxay ku jawaabtay, “Annigu ma qabo inay Hay’adda Interpeace qayb ka tahay caqabadaha Doorashooyinka. Waayo, Annagu wakhtigii aanu Komishanka ahayn Interpeace way nala shaqayn jirtay, weliba intay Shaadhka dhexda ka xidheen wakhtigii doorashadii Wakiilladu ay dhacaysay oo dib-u-dhac nagu yimaadda ka shaki qabnay..Lacagta iyagaa nala dul-taagnaa..markaa annaga wakhtigayagii Interpeace gacantayada midig ayay ahayd.” Waxaanay Marwo Shukri ka hadashay muddo-kordhinta cusub ee Golaha Guurtidu u sameeyay Madaxweyne Rayaale. “Haddii mudda-kordhin uun la wado, oo aan laga waantoobin wakhtigaa kolba dib loo riixayo, waxa iman kara oo ay taasi horseedi kartaa cawaaqib-xumo dadka iyo dalka soo wajaha, waayo haddii dooraba la qaban waayo oo kolba wakhtiga dib loo dhigo, waxa iman karta in Xisbiyadu meesha ka baxaan, haddii ay Xisbiyadu meesha ka baxaana dimuquraadiyaddii aynu sheeganaynay ayaa meesha ka baxaysa.” Ayay tidhi Shukri, waxaanay soo jeedisay in dhammaan si guud loo wada ilaaliyo Nabadgelyada.
Sharcigu muxuu ka qabaa go’aanka Guurtida?
“Xil-gudasho la’aantu waa dembi oo maamus ka xayuubin Madaxweyne ayaa ka furan”
Garyaqaan Maxamed Siciid Xirsi….Waraysi gaar ah
“Haddii ay xukuumadu hortaagan tahay doorashada waxay ahayd inay cadeeyaan Komishanku”
Hargeysa (Ogaal) – Garyaqaan Maxamed Siciid Xirsi ayaa sheegay in sharci ahaan go’aanka Golaha Guurtida Somaliland mudada xilka ugu kordhiyey Madaxtooyada uu u arko sax, Islamaraana waxa uu ku dooday in aanu is hor taageyn waqtiga Komishanku u cayimay in la qabto doorashada ee ah 31-may.
Ka dib markii lagu dhawaaqey doraad muddada Lixda bilood ah ee Golaha Guurtida Somaliland u kordhiyey waqtiga xil-haynta Madaxweynaha Somaliland iyo Madaxweyne ku xigeenka oo waqtigii hore loogu kordhiyey kaga eg-yahay 6-da April, waxa soo baxayay dareeno iska soo horjeeda oo go’aankaas laga muujiyey. Hase ahaatee, garyaqaan Maxamed Siciid oo x